FIKARANA Breguet 941 S FSX & P3D - Rikoooo
Mpanoratra: Patrick Le Luyer
Nohavaozina taminy 01 / 19 / 2020: Rakitra "Aircraft.cfg": fanovana ny haben'ny solika. Rakitra "breguet_check.htm" ary koa ny sary mipetaka eo aminy dia mamaritra ny tena lisitra Bréguet ary tsy lisitra famolavolana ankapobeny ihany koa.
Am-pifaliana no handraisantsika ity modely vaovao «Bréguet 941 S» novokarin'i Patrick Le Luyer ity. Ity add-on ity irery ihany no Bréguet 941 S izay misy amin'izao fotoana izao ao Freeware, fisaorana lehibe an'ny mpanoratra noho ny niarahany ny famoronana tamin'ny vondron'olona Rikoooo.
Niaraka tamin'ny kabinetra sy ny kianja virtoaly, takelaka 2D, feo natao manokana, voankazo efatra, Checklists sy Reference, fanadihadiana amin'ny teny frantsay sy anglisy.
Ampio raha noforonina FSX / FSX-SE ary mifanaraka Prepar3D 4.
Ny Breguet 941 dia fiaramanidina fitaterana ADAC (STOL amin'ny teny anglisy) avy amin'ny mpanamboatra frantsay Bréguet. Ny mampiavaka ny manana elatra tsofina tanteraka avy amin'ireo mpamatsy sy ny flaps izay afaka mametraka amin'ny 95 °, mamela azy hipetraka amin'ny halavirana lavitra. (Loharano Wikipedia)
Teny avy amin'ny mpanoratra hoe: "Nataoko modely ilay Bréguet 941 S raha nanandrana nanakaiky akaiky ny zava-misy aho, saingy satria fiaramanidina manokana io dia tsy afaka namerina ny zava-drehetra aho satria tsy navelan'ny Flight Simulator miaraka amin'ny fiasa fototra izy raha tsy mahazo ny tanako ao anatin'ny fandaharana ara-teknika lalina. , izay tsy fantatro. Satria am-panafody irery aho ary miasa irery aho, tsy ampy roa taona dia nahatratra ny vokatra farany."